Esi Spotify adịchaghị free? 99% ndị na-eji otú a mgbe ha na-agụ nke a
Of niile music gụgharia ọrụ dị taa, Spotify bụ onye na-akawanye gị. Ukwuu nke mere na ọ na-aghọ a àgwà nke gị mgbe ị na-amalite iji ya. Na, gịnị mere ọ bụghị ya? Na ọtụtụ nde ndị songs dị online iji strimụ na-ege ntị, o kwesịrị ịbụ ihe ijuanya na music buff na ị ga-ada na ịhụnanya na onye a nke a ụdị music gụgharia ọrụ.
Otú ọ dị, a otutu ọrụ chọrọ-enwe ike ibudata music on Spotify na na, n'ihi na doro anya na ihe mere, bụ kpam kpam na o kwere omume ka songs na ị na-azọpụta maka offline na-ege ntị na Spotify nwere ike na-na-egwuri na iji gụgharia ọrụ naanị.
Anyị chere na nke na-ị ihe ọzọ ụzọ na nke a. Na-agụ mara otú ị ka nwere ike ibudata music maka free na Spotify.
Part 1.Is ọ ga-esi nweta free Spotify adịchaghị?
Part 2.Download ọ bụla Spotify music for free na Wondershare TunesGo
Part 1. Ọ ga-esi nweta free Spotify adịchaghị?
Ee, ọ bụ. E nwere nnọọ ole na ole na saịtị na-ekwu na-enye efep Spotify kaadị onyinye maka free na anyị adịghị agọnahụ eziokwu na ụfọdụ n'ime ha na ziri ezi nakwa na i nwere ike n'ezie na-a onyinye kaadị si na saịtị ndị a nke ga-ekwe ka ị nwere adịchaghị na akaụntụ on Spotify.
Dị nnọọ na ị ga-abụ nnọọ anya mgbe emeso otú ahụ na saịtị dị ka ọ bụ ihe fọrọ nke nta-agaghị ekwe omume chepụta ma ha bụ ndị n'ezie ma ọ bụ. Olee otú ihe o mere? Ọfọn, n'ihi na EBIDO, ọtụtụ n'ime ndị a weebụsaịtị na-mara ife efe gị na kọmputa na dị iche iche obi omume dị otú ahụ dị ka trojans, adware na malware wdg
N'agbanyeghị nke ahụ, anyị agaghị na-ezere eziokwu na ha dị oké ọnụ ahịa na-enye a-agbalị. Anyị ga na-atụ aro na ị na-mmezi elekọta na-enye ozi ọ bụla si na saịtị ndị a. A asị ifo ịrịba ama nke a ọjọọ saịtị bụ onye nke na-enye gị nyocha edejupụta tupu enye onyinye kaadị. Ya mere, lezie anya nke ha na-anọ nchebe.
Ebe a na-atụ ole na ole ezie na anyị hụrụ na Google maka saịtị na na-àjà free Spotify kaadị onyinye: spotifycoupon.blogspot.com, onlinespotifycode.com na spotifyfreeaccount.com wdg
Part 2. Download ọ bụla Spotify music for free na Wondershare TunesGo
TunesGo si Wondershare bụ magburu onwe software na-enye gị ibudata ma ọ bụ ndekọ Spotify music for free. Ọ na-maara nke ọma na Spotify adịghị enye ọ bụla nhọrọ kwesịrị ekwesị na ibudata songs ọzọ karịa azọpụta ha n'ime ya ngwa.
Wondershare TunesGo nwere ike, Otú ọ dị ndekọ music egwuri na Spotify na-enweghị ọnwụ nke àgwà na otú inye ya ọrụ ndị ahụ e dere music faịlụ na-dị ka onye a na-egwuri. Ka unu wee na-enwe ike ibudata ma ọ bụ ndekọ music on Spotify na Wondershare TunesGo, a lee anya na ndị nduzi na dị nnọọ mfe nzọụkwụ na anyị depụtara maka ị n'okpuru.
1) Olee otú ibudata (ndekọ) si Spotify site TunesGo
Pịa ebe a iji download TunesGo si Wondershare wee wụnye ya na kọmputa gị. Ozugbo arụnyere, oghe ma ọ bụ ẹkedori ngwa.
Ugbu a, a lee anya na kọlụm nke nhọrọ dị ka nyere n'aka-ekpe n'akụkụ nke na ihuenyo Wondershare TunesGo, ị ga-ahụ na e nwere bọtịnụ na-akpọ 'teepu' n'ebe ahụ. Ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ ya n'okpuru ngalaba 'Discover'. Ozugbo ị chọtara ya, pịa na ya.
Ka anya dị ka ị pịa na nhọrọ nke 'teepu', ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ ihe oyiyi nke a diski na bọtịnụ akpọ 'rec' na-acha ọbara ọbara; a bọtịnụ mgbe enwe amalite usoro nke ndekọ. Ọ bụrụ na ị pịa a bọtịnụ, ị ga-ahụ na onye na-edekọ amalite site a ọnụ nke 00:00:00.
Akpụ akpụ na, ọ bụ ugbu oge gị na-ẹkedori Spotify. Na-eche free iji nweta Spotify site na ngwa ma ọ bụ web, dị ka ị na-ahọrọ ebe ma ụzọ ga-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè na nke a. Ka anya dị ka Spotify a n'ụzọ zuru ezu ulo oru, anya maka song na ị chọrọ ibudata na ịmalite ịkpọ egwu ya na ị nwere ike ugbu nwere ya dere.
The oge song amalite na na na Spotify, ị ga-enwe ike ịhụ na onye na-edekọ on Wondershare TunesGo nwekwara malitere Ndekọ song na a na-egwuri. The ngụ oge na anyị tụlere tupu mgbe ahụ ga egosi na nke a dị ka ọ ga malitere na-agba ọsọ.
Ugbu a, nke ikpeazụ nzọụkwụ, ị nwere nyefee music na i dere otú anya na enyemaka nke Wondershare TunesGo (iji nzọụkwụ dị ka e n'elu) na-gị họọrọ ngwaọrụ mkpanaaka. Nzọụkwụ abuana ke usoro a bụ ndị dị mfe na ndị dị ka ndị.
• Iji hụ dere music faịlụ, na-aga aka na ngalaba Library> Kọrọ site n'aka ekpe n'akụkụ aka na ngalaba nke ngwa.
• Ugbu a, jikọọ mkpanaka gị na ngwaọrụ gị na kọmputa, na-eji eriri USB nyere na ngwaọrụ gị.
• Ị kwesịrị ugbu a nri pịa ngalaba Kọrọ ma họrọ nhọrọ nke 'Export Iji' wee họrọ ngwaọrụ dị ka mma.
• Ị nwere ike ma transfer songs otu otu ma ọ bụ akara ha niile ọnụ (tinye akara checkboxes nyere esote onye ọ bụla track).
2) Nyefee music ka PC
Pịa na nhọrọ 'Nyefee Music', kaa songs ma ọ bụ listi ọkpụkpọ ị ga-achọ mbupụ gị PC na-aga mbupụ> Mbupụ na PC.
3) Nyefee music ka iTunes
Họrọ Spotify songs, ị chọọ dị ka iTunes wee si na ala nke Library, pịa bọtịnụ na-ekwu, 'Tinye ka iTunes'. Ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ na songs now atụkwasịkwara iTunes.
4) Nyefee music ka mobile ngwaọrụ dị ka iPhone / iPad / iPod
Pịa 'Nyefee Music' mgbe ejikọta ngwaọrụ gị.
Ugbu a, pịa na nhọrọ Import na họrọ Import si iTunes.
Họrọ songs / listi ọkpụkpọ ị chọrọ nyefee ngwaọrụ gị na iti OK.
5) Nyefee music ka Android ngwaọrụ
Ọzọ, pịa 'Nyefee Music' mgbe ejikọta gị android ngwaọrụ.
Họrọ nhọrọ Import na mgbe mbubata si iTunes.
Họrọ songs / listi ọkpụkpọ ị chọrọ nyefee gị Android ngwaọrụ na iti OK.
Olee otú Ọtụtụ Spotify efu
> Resource> Spotify> Esi Spotify adịchaghị Free?